Foto Google nwere ike ịmata ederede foto ma nye anyị ohere idetuo ya na ngwa ndị ọzọ | Androidsis
Foto Google nwere ike ịmata ederede foto ma nye anyị ohere idetuo ya na ngwa ndị ọzọ
Ebe ọ bụ na Google ga-eweta ọrụ foto foto ya nke Google, ọtụtụ ndị ọrụ tụkwasịrị obi na sistemụ nchekwa n'efu nke ọ na-enye anyị. Mana obughi maka inwere onwe ha, kama ha n’eme ya ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhọrọ ọ na-enye na ndị na-abịa.
Foto Google nyere anyị ohere chọọ site na ebe, ihu, ihe ma ọ bụ echiche ndị ọzọ ..., ma ọ nweghị ike ikwe ka anyị chọta onyogho dịka ederede ahụ o gosiri anyị. Ma ọ dịkarịa ala ruo ugbu a, ebe ọ bụ na nnukwu ọchụchọ ahụ agbakwunyela usoro nyocha njirimara, nke a makwaara dị ka OCR.
Ikpeazụ ọrụ na Google Photos ka kwukwara nwere ike na-ekwe omume nke mata ederede na foto, dị ka a ga - asị na OCR gụnyere. Njirimara a amalitela iru ndị ọrụ ntakịrị obere, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ya, ọ gaghị ewe oge ịnwe ya.
Ọrụ ahụ dị mfe. Site na amata ederede edere na onyonyo, anyi nwere ike chọọ ebe e gosipụtara okwu ndị ahụ. Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike, ozugbo anyị họpụtara onyogho dị na ya, mata ederede zuru oke ma detuo ya iji mado ya na ngwa ndị ọzọ.
Ọbụghị naanị na ọ dị na Bekee, kwa ghotara ihe odide Spanish na odide Arabic na Cyrillic. Ọrụ a agaghị abịa n'ụdị nwelite ngwa, mana ọ na-eme ya site na sava Google, yabụ anyị ga-anọdụ ala ma chere ka ọ rute na-echeghị mmelite n'ọdịnihu nke ngwa ahụ.
Foto Google dị maka nbudata n'efu site na njikọ nke m na-ahapụ na njedebe nke isiokwu a. Ọrụ a, nwekwara n'efu, na-enye anyị ohere ịchekwa foto na vidiyo ọ bụla anyị na-ewere na ọdụ anyị, ịbụ otu n'ime usoro nchekwa kachasị mma maka ama anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Foto Google nwere ike ịmata ederede foto ma nye anyị ohere idetuo ya na ngwa ndị ọzọ
A ga-enye Kirin 990 na IFA 2019 na Berlin